Bangladesh-Gaza : Vavaka Ho An’ny Fandriampahalemana Ao Gaza · Global Voices teny Malagasy
Nandika (fr) i Ba Coulibaly
Voadika ny 20 Mey 2018 5:33 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Italiano, বাংলা, English
“Tsy vita leferina ny zavatra mitranga ao Gaza” hoy ny soratan’ilay bilaogera avy ao Bangladesh Aprio, mamehy amin'ireo teny vitsy ireo ny fahatsapan'ny tontolon'ny bilaogy bengali, manoloana ny zavatra heverin'ny ankamaroan'ny biloagera ho ‘herisetra israeliàna atao amin'ny olontsotra palestiniana’. Rakib manampy hoe ‘toedraharaha mahatsiravina mifanohitra amin'ny maha-olombelona’ raha ny zava-mitranga ao Gaza amin'izao fotoana izao.
Ilay bilaogera, Ahmed Munir, manoratra hoe [bengali]:
Vonona tanteraka hamongotra ny Palestiniana, notafihan'i Israely izao ny faritra Gaza. Lasa mpitsoaponenana ao anatin'ny taniny ihany, tsy afa-manoatra ireo Palestiniana afa-tsy ny miatrika tsy mahavita na inona na inona manoloana ireo fanafihana tsy mitsahatra ataon'i Israely, mitohy mamono ireo mpiray tanindrazana aminy… Amin'ny anaran'ny Hamas, drafi-panadiovana foko iray efa vita kajy no tohizan'i Israely ataony amin'ny vahoaka Palestiniàna. Io no ady faran'izay tsy mifandanja sy feno herisetra indrindra.
Farukh Wasif mihevitra hoe fandaharanasa iray efa voalamina tsara nataon'i Israely io hihazàna ireo Palestiniàna ao amin'ny faritr'i Gaza. Manoratra izy:
Amin'ity indray mitoraka ity, tsy ny Hamas na ny Palestiniàna mpanohitra no kendren'ilay fanafihana fa tena ny Palestiniana rehetra mihitsy, mba hamotehana ny herintsain'izy ireo sy ny fahasahiany, amin'izay izy ireo handohalika sy hangataka vao ho velona. Amin'ny famotehana ny fananany, ireo ivontoerana ara-kolontsaina, ary amin'ny fanaovana ny fiainan-dry zareo ho tsy laitra hiainana, ny tanjona dia ny handroaka azy rehetra mihitsy hiala amin'io tany io. Izany no antony ikendrena ny toeram-ponenan-dry zareo, ny sekoly ary ny hopitaly amin'ireny fanafihana ireny.
Inona no zara asan'ny Hamas ao anatin'ny ady misy amin'izao fotoana izao ? Misy tsiny azo omena azy ve amin'ny zavamisy ankehitriny ? Bilaogera bengalis vitsivitsy, na dia tsy manohana mavitrika ny idealy na ny filozofian'ny Hamas aza, no maneho ny fangorahany manoloana ny ‘fikomiana hanoherana ny famoretana’. Aprio manamafy fa :
Tsy mpanohana ny Hamas aho saingy mieritreritra fa tsy aretina akory ny Hamas, soritraretina fotsiny….ao anatin'ny vahoaka manontolo na firenena voaporitra mandritra ny fotoana maharitra, izay tsy mitsahatra nampiainin'ny fitondra-miaramila ny tahotra ny ho faty, dia hisy tsimoka fahaterahan'ny ‘Hamas’ na ho ela na ho haingana.
Ahmed Munir tsy afaka ny tsy hijery ny eso ao anatin'ny anjara toeran'i Israely mpamoritra. Manoratra izy:
Ny mahatsikaiky dia izao, adinon'i Israely ny Tantara. Izy ireo no tokony ho vahoaka hanadino farany indrindra ny fahatsiarovana ny vonomoka nandritra ny Ady Lehibe Faharoa, andrana nataon'ny nazi hamongorana azy mianakavy. Io fanjakana Hebreo matanjaka io ihany dia efa vavolombelona izy tenany hoe sarotra ny handrava vahoaka iray manontolo amin'ny fanaovana vonomoka faobe. Araka izany, ny tantara dia milaza amintsika fa hiverina hitondra valinkafatra mavesatra ry zareo Palestiniàna noho ireo heloka bevava natao tamin'ny vahoakany. Ho re manerana ny faritra Afovoany-Atsinanana sy izao tontolo izao ny akon'ireny heloka bevava ireny. Ankehitriny, ny tena ilaina maika indrindra dia ny fandriampahalemana, tsy misy afa-tsy fandriampahalemana.
Misy hatezerana miha-mipoitra ihany koa eny anivon'ireo bilaogera, izay mihevitra fa ny ‘politikan'ny fitoniana’ ataon'i Bush amin'i Israely dia tomponandraikitra tanteraka amin'ny fitohizan'ny olana ao Gaza. Sawkat Ali manoratra hoe:
Ao Israely mihitsy, an'arivony maro ireo olompirenena manohitra ity fanafihana an'i Gaza ity. Na taorian'ny niezahan'i Amerika hanamarina io fanafihana io aza. Toy ny mandeha amin'ny làlana mitovy i Osama sy Bush.
Ilay bilaogera Satyanneshi koa nametraka fanehoankevitra iray miampanga ny anjara toeran'i Etazonia ao anatin'ilay olana. Manoratra izy:
বিশ্ব বিবেকের কন্ঠস্বর’ বিশ্বঈশ্বর আমেরিকা বলছে এ গণহত্যা জায়েজ। অথচ মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের ধূয়া তুলে এই ঈশ্বরই সাদ্দামের ইরাক দখল করে নিয়েছে।
Ilay ‘Mpiambina ny feon'ny fieritreretan'izao tontolo izao, ilay “Andriamanitr'izao tontolo izao”, milaza fa ilaina io vonoolona faobe io. Kanefa, io “andriamanitra” io ihany koa no nampiasa tsy nisalasala ireo “heloka bevava mifanohitra amin'ny maha-olombelona” nataony tamin'i Saddam mba hananiham-bohitra sy hakàna an'i Iràka.
Ahmed Munir mihevitra koa fa i Etazonia no manao izay hampaharitra ilay fifandonana. Heveriny fa ny valinteny hoavy avy any Amerika amin'io fifandonana ao Gaza io dia hamboraka amin'izao tontolo izao raha toa ka tena tsy mihatsara ivelantsihy tokoa ny fitondran'i Obama amin'ny resaka famahàna ireo olana ao Afovoany-Atsinanana. Manoratra izy :
Raha toa samihafa kely amin'ny an'i Bush ny governemanta vaovao amerikàna eo ambany fitantanan'i Obama, dia io fotoana io irery no hanambara izany. Raha tsy vitan'ilay governemanta vaovao ny hijery an'i Iràka sy Palestina aminà fijery iray vaovao, dia ho teniteny foana sy poakaty ireo fampanantenana fiovàna nambaran'i Obama.
Antsoin'ireo bilaogera toa an'i Aprio, ireo mpampiasa aterineto mba hiray hina sy hanohana ireo tradoza ao Gaza, Ny sasany, toa an'i Trivuz, koa dia nanomboka vondrona iray ho fanoherana ety anaty Facebook. Entanin'i Trivuz ihany koa ireo mpamaky azy mba haneho ny fanohanany an'ireo tradoza ao Gaza amin'ny fanaovana ankivy ireo vokatra sy marika israeliàna.
Afrika Mainty 3 andro izay